BiasLighting.com: Yakarurama 6500K Bias Mwenje - MediaLight Bias Mwenje
Mahara USA Kutakura
Kutungamirwa kwenyika yose
mumazuva 2-6 chete
& 2-gore reLX1
8 am-3pm kuMabvazuva Mon-Fri
Iyo MediaLight Mk2 Series: Yakanakisa Kuvhenekesa Kwemavara-Akakomba Vhidhiyo Ekutarisa Mamiriro Ako Wanga uchitarisa TV zvisirizvo hupenyu hwako hwese? Ne ...
Mutengo wanhasi $14.95
Wanga uchitsvaga referensi yemhando yemwenje isingapaze bhangi. Kuunza LX1 kubva kuvagadziri veThe MediaLight. Tinoziva kuti fru sei ...
Zvigadzirwa zvemuchina Iyo MediaLight Mk2 Series: Yakanakisa Kuvhenekesa Kwemavara-Anokosha Mavhidhiyo Ekutarisa Mamiriro Ezvinhu Hazvisi zvekungowana izvo zvakakwana ...
Iyo MediaLight Bulb yakagadzirirwa kutevedzera SMPTE Standard ST 2080-3: 2017 'Reference Kuona Nharaunda Yekuongorora HDTV Mifananidzo.'Featuring t ...
Iyo Yakanaka-Lume ™ Pro neMediaLight LED tafura yemwenje yakagadzirirwa kushandira yekudzora koni nzvimbo yekuvhenekera mune yakakosha color grading post productio ...
Kururamisa iwe unogona kuona
Iyo MediaLight Mk2 Bias Lighting System ibudiriro mune chaiyo nyanzvi uye yekugara imba theatre bias mwenje iyo ichaita kuti yako TV iratidzike zvirinani pasina kukuvadza mufananidzo kunyatso. Zvino, izvo hazvisi zvekunyepedzera chete - indasitiri yakajairwa. Ona chikonzero nei Iyo MediaLight yakangopihwa iyo AVForum's Edhiyo's Sarudzo Mubairo uye gumi kubva pagumi ekuongorora mamaki!
Ona zvimwe, ona zvirinani
MediaLight Mk2 Series Bias Lights, lightbulbs, uye matafura etafura, ese anoratidzira akafanana akafanana D65 ColourGrade Mk2 chip.
Wana zvakanyanya kubva kumba kwako cinema nekuvhuna kwepfumo Spears & Munsil UHD HDR Benchmark UHD Blu-ray Disc.
Yakanakisa kukosha mu ISF-yakasarudzika bias mwenje
LX1 6500K Bias Mwenje ndiyo yakasarudzika sarudzo yemusanganiswa wakasarudzika wechokwadi uye kugona. Aya mwenje ISF-Certified bias mwenje inotangira pamutengo wakaderera we $ 14.95 (ine yemahara 2-Day Fedex USA kutumira!) Saka hazvishamise kuti ivo vari kutengesa kunze nekukurumidza!
Kuunza Iyo Yakanaka-Lume Pro neMediaLight Desk Lamp kune mavara. Mheni inodzorwa yenzvimbo dzako dzekutonga, uye hapana kwausingade.
Nyanzvi colorist Ollie Kenchington anotsanangura mabhenefiti eakakodzera akateedzerwa D65 kukoshesa mwenje kubva kuMediaLight
Ona zviri kutaurwa neveongororo
"[MediaLight] inoita basa rayo zvirinani kupfuura chero chinhu chiri kukwikwidzwa parizvino."
"Pakupedzisira, MediaLight Mk2 Flex ingangodaro iri nyore, yakachipa uye yepamusoro yekukwiridzira iwe yaunogona kugadzirira imba yako cinema setup."
Chris Heinonen, Referensi Imba Yemitambo
Medialight Flex Mk2 Bias Lighting system (ndiyo) yakapusa $ 60 kusvika $ 100 madhora ini ndinogona kukurudzira kuti iwe upedze yako yemitambo yemumba, kunyanya kana iwe watora nguva yekugadzirisa kuratidza kwako. Yakakurudzirwa!
Indiana Lang, Zvakavanzika zveImba Theater & High Fidelity
Maitiro ekumisikidza kusarura kuvhenekera nzira kwayo
Zvita 1, 2021 Jason Rosenfeld
Hurukuro yakareba pamusoro pekusarura mwenje naTodd Anderson kubva kuAVNirvana.com
Heino hurukuro pamusoro pekusarura mwenje uye nharaunda naTodd Anderson, kubva kuAVNirvana.com. Inobata pane dzimwe nyaya dzakafanana kubva kuvhidhiyo yedu yapfuura asi inoenda zvakanyanya mune zvimwe zvinonetsa mutengi.
Nyamavhuvhu 8, 2021 Jason Rosenfeld
Nei MediaLight isiri kutengeswa paAmazon.com?
Iwe unozoona kuti hatitengesi MediaLight paAmazon.com. Isu pachedu tinotenga zvigadzirwa zvakawanda kuAmazon, semaprinta makadhibhokisi nemabhuku, asi zvinhu zvakawanda zvinoshandira zvigadzirwa zvemidziyo hazvienderane nechigadzirwa che niche ...
Nyamavhuvhu 1, 2021 Jason Rosenfeld
MediaLight uye LX1 Bias Mwenje inotsigirwa ne3M VHB (Yakanyanya Zvakanyanya Bond) inonamira. Iri iglue rakasimba uye isu takadzorera kumashure kubva kune yakajairwa 3M yekunamatira muna Nyamavhuvhu 2017, apo yedu MediaLight renji yakatanga kudonha kubva kune nyowani LG ...
Iyo indasitiri mwero mukusarudzika mwenje
Yese MediaLight uye LX1 inoteedzera D65 tsvete yekuvhenekera tambo, girobhu kana mwenje unovakirwa kururamisa pamusoro pehupenyu hwechigadzirwa. Varairidzi, macalibrator, vanofarira imba mabhaisikopo, vatori vemifananidzo, zvivakwa zvemashure mekugadzira, uye nyanzvi dzekufungidzira kwekurapa pasirese vanoenzanisa zita reMediaLight nereferenzi mhando uye mashandiro
Chese MediaLight chigadzirwa, kubva ku $ 32 MediaLight Eclipse yemakomputa kune yedu MediaLight Pro ISF-Certified yechokwadi D65 tembiricha tembiricha chaiyo uye yakakwira ruvara kupa index (CRI)
Zvese zvinhu zveMediaLight bias mwenje system inovharwa kwemakore mashanu kubva pazuva rekutenga nekuda kwezvikonzero zvese zvinofungidzirwa. Izvi hazvingogumiri mukukanganisa kwekugadzira. Iyo zvakare inovhara yekuisa goof-ups, tsaona kukuvara uye kuba
Kupenga chaiko. Tsvina yakachipa.
"Zvakavanzika zveImba Theatre uye High Fidelity zvinoti, Zvakaoma kufungidzira OLED TV ichitarisa yakatoguta uye inopesana asi mwenje wekusarura wakave nemhedzisiro iyoyo. . . Iyo inovandudza chiitiko chekuona neyakagadziridzwa mhando yemhando uye yakaderera kuneta kwemaziso; kukunda-kuhwina. Kusvika pakuenda tweaks, hazviite zvirinani pane izvi. Scenic Labs LX1 Bias Lighting Kit inogamuchira Kurudziro Yangu yepamusoro. "
Mwenje isiriyo = mufananidzo usiri iwo
Iwe wakabata zvakaomarara kuratidzira kwako, saka nei iwe uchi "chena" nemwenje usiri iwo?
Iyo MediaLight yakagadzirwa neScenic Labs, ivo vapepeti veMapfumo & Munsil Benchmark. Isu takaona kuti hapana munhu aigadzira mwenje wakasarudzika unodhura uye waipa iyo yepamusoro CRI uye chaiyo CCT (inoenderana tembiricha tembiricha) inodiwa nehunyanzvi colorist uye yepamusoro-kumagumo imba cinema hobbyists.
Tora zvakakomba nezve mwenje wekusarura
Zvese zvaunoda zviri mubhokisi
Izvo zvaive zvakakosha kuti isu tiite Iyo MediaLight ive yakajeka sezvinobvira kune nyanzvi apo zviri nyore nyore kuti vatengi vekumba vaise paTV yavo.
Iwe haudi chero maturusi. Hapana chekusungira, hapana waya dzekucheka, uye hapana chimwezve chekutenga. (Anosarudzika MagicHome WiFi dimmer inowanikwa, asi hazvidiwe kushandisa MediaLight).
● Yakakwira CRI uye Super-Yakakwira CRI mwenje mitsetse (-98-99 Ra, zvinoenderana nemuenzaniso)
● USB AC Adapter (inomhanya kubva kuchiteshi che USB pane yako kuratidza kana TV). Eclipse inosanganisira iyo 4ft USB yekuwedzera
● 5V infrared PWM dimmer, inowirirana neyevose kure vatongi, IR mabhiriji uye blasters
● Infrared Remote control (inowirirana nezvose zvakasarudzika zvakaita seHarmony) kune vese asi iyo Mk2 Eclipse komputa yekutarisa modhi, iyo inosanganisira ye-in-line dimmer
Munguva pfupi yapfuura MediaLight Bias Lighting Ongororo
Vatengi vanoverengeka vakatirumbidza pamusoro pekuti imba yedu inotaridzika sei, uye MediaLight chikamu chikuru cheizvozvo.
Yakakwirira chigadzirwa. Basa revatengi raive rakatanhamara. Nekuda kwehukuru hweTV, ini ndaifanira kumirira vanakomana vangu vaviri kuti vauye kumba kuEaster kuzobvisa TV kubva pamadziro ndokumuradzika pasi pamubhedha. Pandaive nemubvunzo, rutsigiro rweMediaLight rwakandibatsira kuenderera ISITA kuti zviitwe. Kuiswa kwaive nyore. Chiedza chinopihwa kubva ku USB port. Mwenje inouya uye kudzima neTV kuvhura uye kudzima. Kutarisa kukuru.
Zvese nezve zvigadzirwa zveMedialight zviri zvepamusoro notch. Ivo vane chigadzirwa chikuru, icho chinonzwa chakakwirira mhando, tembiricha yechiedza yakakura, iyo wiring uye switch dzakanakisa, uye iri kure inoshanda chaizvo kunyatso gadzira kupenya. Ini handingatenge imwe tsvete mwenje kune chero application.
Sign up kune yedu MediaLight uye LX1 inogadziridza
Hatisati tambotumira email, asi hazvireve kuti hatizo!